'झाँसीकी रानी' भर्सेस ‘मणिकर्णिका’
वर्षा शर्मा पोखरा, माघ १८ नेपाली समाजमा घरपरिवार चलाउने जिम्मेवारी प्रायः महिलाकै काँधमा हुन्छ । श्रीमतीले राम्रोसँग घरव्यवहार धानिदिएपछि नै श्रीमान्ले आफ्नो पेशा तथा व्यवसायमा उन्नति गर्न सकेका हुन्छन् । घरमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने महिलालाई घरबाहिर भने नेतृत्वमा पुग्न विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपर्छ । धेरै महिलाले आफूसँग क्षमता…
गगन थापा पोखरा, माघ १५ डा.गोविन्द केसी १६औं अनसनमा हुनुहुन्छ। एउटा मान्छे उही विषयमा यति धेरैपटक अनसन किन बस्नुपर्योरु बस्दा के भयो त ? प्रश्नहरु उठेका / उठाइएको छन्। अहिलेको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला एकपटक अनसनको श्रृंखलालाई हेरौं। वि.सं.२०६९ असार २१ गते पहिलोपटक आईओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई बरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ…
जक्सन डटकम पोखरा, माघ १४ चाडपर्व होस् वा कुनै खुसीयालीमा रक्सी पिउने चलन बढ्दै गएको छ। रक्सी पिउँदा जति मजा आउँछ त्योभन्दा बढी पिए पछिको ह्यांगओभरले हैरानी बनाउने गर्छ।कतिपय व्यक्ति पिएपछि त ओछ्यानमा थला नै पर्ने गर्छन्। रक्सी पिउनेहरु पेट पोल्ने, टाउको दुख्ने, वान्ता हुने,रिंगटा लाग्नेजस्ता समस्याबाट ग्रसित हुने गर्छन्…
मानौं, तपाईंका मिल्ने साथी छन् । साथीसँग औधी मिल्नुहुन्छ । एकअर्कालाई सहयोग गर्नुहुन्छ । दुःखसुख साट्नुहुन्छ । मनको सबै कुरा पोख्नुहुन्छ । के त्यो साथी तपाईंको प्रेमी वा प्रेमिका हो ? यदि कुनै विपरितलिंगी साथीसँग तपाईं घनिष्ठ रुपमा जोडिनुभएको छ भने, हामी भन्छौं ऊ तपाईंको प्रेमी वा प्रेमिका हुन् ।…
सकम्बरीलाई सुयोगविरको प्रेमपत्र
–अनिकर्मा प्रिय सकम्बरी शिरीष र तिमी मलाई…
कुमारित्व गुमाउने सही उमेर कति ?
बीबीसी युवा–युवतीलाई निकै कम उमेरमा यौन सम्बन्ध स्थापित गरेर आफ्नो कुमारित्व गुमाएकोमा निकै अफसोस हुने ब्रिटेनमा यौन व्यवहारमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ । किशोरावस्थामा भएका एक तिहाई बढी महिला र एक चौथाईभन्दा बढी पुरुषले पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्दा, आफ्नो उमेर सही नभएको स्विकार गरेका छन् । ब्रिटेनमा…
दीपक पौडेल विदेशबाट फर्केको म फेरी विदेश जानकै लागि काठमाडौँको खाल्डोमा भौँतारिँदै थिएँ । सन्दर्भ केही वर्ष अगाडिको हो । कतार एयरवेजको टिकट खरिदार्थ कोटेश्वरदेखि हात्तीसारसम्मको यात्रामा थिएँ । सारथी थियो– सफा टेम्पो । विदेशिने मेरो चाहनालाई न घर, न परिवार, न गाउँ, न समाज कसैले रोक्न, छेक्न सकेन ।…
-डा. सुवास भट्टराइ पहिले-पहिले मोटाउनुलाई निकै राम्रो पनि मानिन्थ्यो । अहिले मोटाउनु मानिसका लागि अभिशाप बन्न थालेको छ । निरन्तररुपमा मोटाउँदै जाँदा शरीरमा विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ । मोटोपना भनेको शरीर को तौल बढ्ने हो। नेपालीहरुमा मोटोपना बिशेष गरेर शरीरभरि भन्दानि पेटमा बढेको देखिन्छ। अव्यवस्थित जीवनशैली र…
म एक ३६ वर्षे गृहिणी हुँ । मलाई थाहा छ गृहिणी शब्दमा केही विशेषता छैन । निकै पट्यार लाग्दो हुन्छ । तर यो वास्तविकता हो । म १५ वर्षदेखि विवाहित छु । हाम्रा जुम्ल्याहा सन्तान १४ वर्षका भए । मेरा श्रीमान् ३७ वर्ष पुगे र उनी स्टेशनरीको पसल चलाउँछन् ।…
'विहारीलाई सेनामा किन लिदैंन भारतले'